February 27, 2010 6:26 am
मन्त्रीले व्यापारतर्फ किन टाउको दुखाएका
मसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी छपाइको काम भारतलाई दिने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरेपछि अत्तालिएकी परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले मूख्य सचिवमाथि खनिन थालेकी छन् । आक्रोश मात्र होइन, रिस आगो पनि ओकलेकी छन् गिरिजाबाबुकी सुपुत्री सुजताले । सरकारी कर्मचारी कुनै पनि मन्त्रीबाट सुरक्षित रहेनन् । मुख्य सचिवलाई त र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने मन्त्रीज्यूले अन्य कर्मचारीलाई कति आहलकाहल पारेकी छन् होला, पोखिनसक्नु नै छ जस्तो छ पीडा ।
मन्त्री कोइरालाले मूख्य सचिवकै कारण एमआरपीका लागि आह्वान गरिएको ग्लोबल टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रद्द गर्नुपरेको आरोप लगाउँदै मुख्य सचिव माधव घिमिरेको राजीनामा मागिन् । कर्मचारीले मन्त्रीहरुको राजिनामा मागेको त सुन्नुपरेको थियो, मुख्य सचिवको राजिनामा मागेको सुनेर कानले पनि अनौठो मानिरहेको अनुभुति भइरहेको छ । यस्तै कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँको नजिकै रहेको सिंहदरबारमै हुन्छ । धन्य प्रभु कुटाकुट भने भएनछ । कुटाकुट नै भएको भए पनि के नै गर्न सकिन्थ्यो र खै ।
लेखा समितिले एमआरपीका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छनौटमा परेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय र सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मितव्ययी ढंगले कम बिबाद हुने गरी आवश्यक्ता अनुसार द्विपक्षिय वार्ताबाट एमआरपी छपाइको प्रक्रिया अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर भारतमा एमआरपी नछाप्न लेखा समितिले दिएको निर्देशनपछि पनि कोइरालाले भने भारतमै एमआरपी छपाउने अडान दोहोर्‍याएकी छन् ।
होइन, यो मसिन भारतमै छाप्नुपर्ने कारण के होला । भारत नजिकको मित्र भएको हुनाले त्यहाँका व्यापारी महोदयलाई खुशी पार्न सुजताले उपाय अपनाएकी पो हुन् कि शंका गर्नुपर्ने बेला भएको छ । परराष्ट्र मामिलामा कमजोर भएर त्यत्रो मन्त्रालय पाएको पनि त कहाँ पो होला र । बुबा गिरिजा बाबुले सानो सम्भावना देखेर दिएको होइन । ठुलै सम्भावना देखेर हुनुपर्छ छोरीमा त्यत्रो मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरेको ।
त्यसो त मन्त्रीज्यूले ठुलो रकम हात पर्ने सम्भावना देखेको बेला त जस्ता सम्भावना पनि औंल्याउन खोज्ने । टेण्डर नै रद्ध गरेर यस्तो बबाल गर्न खोज्ने ? टेण्डर भनेको के हो भनेर कक्षामा पढाई सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ अब, परराष्ट्रमन्त्रीका लागि । होइन भने कम्तीमा टेण्डर प्रक्रिया त मान्नुपर्ने हो नि । टेण्डरको अर्थ बुझाउनका लागि भएपनि कक्षा चलाउनुपर्ने भएको छ । बाबुले परराष्ट्रमन्त्री दिलाएको भन्दैमा मुख्य सचिव अनि प्रधानमन्त्रीको सातो खान त पाइन्न नि हो । तस्वीरमा, सुजाता कोइराला ।
जातीय संगठनहरुमा पनि तानातान
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अध्यक्ष लक्ष्मण थारुसहित तीन जनालाई निष्काशन गरेको छ । काठमाण्डौंमा आउने, दुवै पक्षले थारु समुदायका लागि खुबै लडेका छौं भन्ने, वा जातीय अधिकारको कुरा उठाउँदै चन्दा उठाउने अनि विवाद गर्ने । यही क्रमको पछिल्लो शिकार बनेको छ यो संगठन । कहिले मधेश प्रदेशको समर्थन त कहिले मधेश प्रदेशको सहयोगी आन्दोलन सहयात्री, यस्तै यस्तै नीतिगत विषय र मतभेदमा रुमल्लिएको संगठन बनेको छ यो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा यो संगठनको महत्व वा प्रभाव निकै कम होला तर उसकै दाबीअनुसार गरिएका विविध हडतालका कार्यक्रममा नेपाली नागरिकले ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । बन्दको समर्थनमा कमैले आफ्नो व्यावसाय, सेवा बन्द गरे वा बाध्यतावश त्यसो गरे होलान् त्यसको विश्लेषण अर्कै पाटो हो । तर क्षति भने जानेर, नजानेर धेरै किसिमले भएको छ, वा भनौं बलिदान भएको छ, आन्दोलकारीको भाषामा ।
मञ्चको नीति र आचरण विपरित काम गरेको तथा एक मधेश एक प्रदेशको माग गर्दै आएको मधेशी जनअधिकार फोरमसँग गठबन्धन गरेको आरोपमा थारुलाई निष्काशन गरिएको जनाइएको छ । त्यसो त थारु वा सम्पूर्ण नेपाली परिप्रेक्ष्यमा लक्ष्मण थारु कति चिनिएका व्यक्तित्व हुन्, धेरै व्याख्या गर्न जरुरी नहुनसक्छ, किनभने उनलाई धेरैले धेरै तरिकाले चिन्छन् ।
मञ्चका सदस्य कुमार लिङ्देनले फागुन ९ गते मञ्चको आकस्मिक बैठकबसी अध्यक्ष चौधरी, सचिवालय सदस्य रबीन्द्र थिङ् र बुद्धछिरिङ्ग मोक्तानलाई निष्कासन गरिएको जानकारी दिएका छन् । अब यो निष्काशन र फोरमले थारुलाई आफ्नो पक्षमा तानेपछि आएको छ । मधेश र थारु छुट्टै हो भन्दै पहिचानको नयाँ परिभाषा बनाउन हिँडेका लक्ष्मणपछि कुमार लिङदेन अध्यक्ष बनेका छन् । १७ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १४ जनाको बैठकले लिङ्देनलाई नै अध्यक्षमा चयन गरेको छ ।
जातीय राज्यलाई नयाँ संविधानमा कसरी परिभाषा गर्ने, राज्य नै बनाइयो भने कति अधिकार पाइने जस्ता विषयमा जातीय राज्यका विरोधी मात्रै होइन, स्वयं जातीय राजनीति गर्नेहरु पनि दोधारको राजनीतिमा छन् भन्ने थप प्रष्ट भएको छ । एउटा संयुक्त संगठनलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा त यत्रो तानातान छ भने कस्ले कति, के अधिकारका लागि लड्ला भनेर आशा गर्न सकिन्छ र । संगठन कसरी चलाउने भन्ने विषयमा त चलाउने पदाधिकारीले नै सोचेका होलान्, तर के परिणाम आउँछ भन्ने पो अपेक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । तस्वीरमा, मञ्चका अध्यक्ष बनेका लिङदेन ।
होटलबाटै कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि
कत्रा कत्रा कुरा गर्ने मान्छेलाई गाडीको चिन्ता
वर गयो गाडीकै सुर्ता, पर गयो फेरि गाडीकै । यो भनाईसँग मिल्दोजुल्दो जीवनशैली बनेको छ, एमाले वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीको । माओवादी कार्यकर्ताले गाडी खोसेको कति दिन बितिसक्यो, तर झझल्को उही गाडीको । यहीबीचमा एमाले नेता ओलीले आफुले चढेको गाडी बैधानिक र माओवादी नेताहरुले चढेको गाडी अबैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । गाडीको बारेमा धेरै बोलेका छन् ओली, गाडीले बोल्ने भन्दा पनि निकै धेरै ।
ओलीले सरकारले पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई गाडी चढ्न दिने गरेको उल्लेख गर्दै माओवादीले आफुले चढेको गाडी खोसेको विषयमा सरकारकले नै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । होइन, गाडीको सुर्ता यत्रो हुँदा गाडीले ओलीको सुर्ता गरेको त कतै सुनिन्न, फेरि कुरा उठ्ला निर्जीव वस्तु पनि कसरी बोल्छ । तर बोल्दोरहेछ, कति समयअगाडि गृहमन्त्री बन्दादेखि पाएको गाडीको निर्जीव कुरा त उठ्दोरहेछ भनेपछि ।
काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको भेटपछि ओलीले आफुले चढ्ने गाडीमा विद्युत प्राधिकरणबाट तेल हाल्ने नगरेको दाबी गरेका छन् । कुरा त सेवा र सुविधामै आएर अड्कियो । तेल नहालेको ओलीको दाबी छ, चालक कस्ले दिन्छ, त्यो चाहिं नभन्ने ओली जी ? पाङग्रा, पाटपुर्जा कस्ले दिने, त्यो पनि खुल्न पाए जनताले सुसूचित हुनबाट वञ्चित हुनुपर्ने त थिएन नि ।
होइन, माओवादी कार्यकर्ताले प्राधिकरणका कर्मचारीको रुपमा किन त्सो गरेका होलान् बिचरा ओलीलाई एक्लै बनाएर । कि माओवादीलाई गाली गरेको सहनै नसकेर त्यसो गरेका होलान् माओवादी कार्यकर्ताले । यो पनि हुनसक्छ । त्यसो त, नेता ओलीले नेपाली शब्दकोशमा समेत फेला पार्न गाह्रो पर्ने शब्द ल्याएर माओवादी नेता र पार्टीको सातो उडाउने गर्थे ।
बरु अब नेपाली शब्दकोश खोज्ने कष्ट झन् बढला भन्ने चिन्ता छाउन थालेको नेपाली भाषाविज्ञहरुमा । माओवादी कार्यकर्ताले केही बिगार नगर्दा त ओलीले माओवादीको खोइरो खन्थे, अब ओलीका मुखबाट कति निस्कने होलान् गालीका पोका । वा भनौं आलोचनाका भाषाहरु । यही विषयलाई लिएर एमाले र माओवादी कार्यकर्ताहरु भिडेनन् भने तथा गाली मै सिमित रहने हुन् भने नेपाली शब्दकोशलाई फाइदा पुग्ने निश्चित नै छ । माओवादी कार्यकर्ताले भने कहिले सुधार्ने हुन् बानी, नेताहरुको छानी छानी गाडी थुतेर । तस्वीरमा, केपी ओली ।
सरकारमा उत्पन्न अनावश्यक खटपटी
अमेरिकामा कांग्रेसको झगडा: विजय पौडेल, न्युयोर्क
कांग्रेसको झगडा देशमा मात्र सीमित रहेन।
February 04, 2010 5:42 am
एक हुने र फुट्ने केटाकेटी खेलजस्तै त भएन ?
जताजता शक्ति उतै भक्ति
विद्युतलाई पनि पैसोकै चिन्ता
सस्तो लोकपि्रयतामा रमाउँदै प्रधानमन्त्री नेपाल
सधैं उदघाटन, भाषण र विशिष्ट नेता तथा ब्यक्तिहरुसँगको भेटघाटमा व्यस्त रहने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एक दिन भने सर्वसाधारणको गुनासो सुनेको बताएका छन् । त्यो पनि सिंहदरबारमा । प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई कार्यालयमै बोलाएर पीरमर्का बुझेको इतिहासमा कमै पाइन्छ । प्रधानमन्त्री पदमा पुगेर पनि सर्वसाधारणका सवालमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपालले देखाउन खोजेका छन् ।
तर यसमा कति इमान्दारीता छ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । जहाँसम्म विकट जिल्लाबाट सुत्केरीलाई काठमाण्डौं ल्याउने, गोली लागि मृत्यु भएकालाई आफैं भेट्न जाने भन्ने प्रश्न छ, यसको स्वागत भएको छ । छ, राष्ट्रिय स्तरमै रहेका समस्या बुझ्न सर्वसाधारणलाई आफ्नो कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाउनुको अर्थ के होला । यसमा सस्तो लोकपि्रयताको गन्ध बढी पाइन्छ । प्रधानमन्त्री नेपाल पढन्ते भएको हुनाले थाहा हुनुपर्ने हो कि, नेपालको जनसंख्या कति छ, र प्रधानमन्त्रीले एक दिनमा कति जनाको गुनासो सुन्न सक्छन् ।
अहिलेको जमानामा सञ्चारमार्फत, आफ्ना मातहतका सरकारी निकायमार्फत आएका गुनासो पो सुन्नुपर्नेमा अढाई करोड जनसंख्या रहेको नेपालका काठमाण्डौंमा बस्ने, सिंहदरबारसँग पहुँच भएका मानिसलाई आफ्नो कोठामा बसेर पीरमर्का बुझ्दैमा के पो होला र । वास्तवमा केही हुने होइन । प्रधानमन्त्रीले सीधा सर्वसाधारणले सम्पर्क गर्न थाले भन्नेजस्तो त भएको छ । तर यसको असर दिगो रुपमा पर्ला कि भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । उठ्नु स्वभाविक पनि हो ।
जहाँसम्म सरकारको कामबारवाही, सरकारी सेवा सुविधाको प्रभावकारीता र सर्वसाधारणले भोग्नु परेको समस्याबारे प्रत्यक्ष रुपमा गुनासो सुन्ने कुरा छ, कति जनाको गुनासो सुन्ने ? के ती भेट्न गएको केही मानिसले मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्छन् त ? अझ सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वसाधारणसँगको भेट शुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । यो त झनै व्यंग्य गरेजस्तो नै भएको छ ।
त्यसैले अहिलेको जमानामा निर्वाचन, सञ्चारमाध्यम, सरकारी निकाय, वा सेवाग्राही आउने ठाउँ, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आयोग, समितिका प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने बेलामा उहिले बाजेका पालामा जस्तै गरी गुनासो सुन्ने चाला लाई विश्वास गर्ने आधारै छैन । विश्वास गर्नु पनि कसरी ।
January 27, 2010 5:54 am
संघर्षको दिशा स्पष्ट नभएपछि
दुइ विपरित ध्रुबमा उभिदै आएका मधेसी जनअधिकार फोरम र थरुहट संघर्ष समितिबीच संपूर्ण तराइलाई एउटै स्वायत्त प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । यो विश्वमा अर्को आश्चर्य भएको छ भन्दा फरक नपर्ला । यो घटनाले देखाएको छ कि राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुन्नन् भन्ने कुरा सही नै रहेछ । यो सहमतिसँगै फोरमले मधेस प्रदेशको माग र थरुहटले स्वायत्त थरुहटको माग परित्याग गरेका छन् । प्रष्ट छ कि यो घटनाले कति मधेशी मोर्चाहरु फुट्नेवाला छन् ।
दुवै दलले पूर्वको उदयपुरदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म एउटै स्वायत्त प्रदेश बनाउनु पर्नेमा सहमति भएको जानकारी दिए । प्रदेशको नाम भने आपसी सहमतिमा पछि तय गरिने पनि उनीहरुले बताएका छन् । यसअघि मधेश शब्दबाट विरत्तिएर फोरमविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको समितिको दिशा के भन्ने प्रश्न अहिले आएर गर्न थालिएको छ । त्यसो त समिति पनि आफैं फुटको शिकार बनेको समुह हो । के कुराले आकर्षण गर्‍यो आफ्ना धारणा बिर्सेर मिलीजुली आन्दोलन गर्न यी दुवै पक्षलाई ।
माग पूरा गर्न संयुक्त संघर्ष गर्ने ती दलले बताएका छन् । फोरम पनि फुटिसकेको दल हो । केही दिनअघि मात्रै तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक, सदभावना लगायतका दलसँग संयुक्त आन्दोलन गर्ने भनिएको थियो, एक मधेश एक प्रदेशका लागि भनेर । अब ती सबै सहमति कहाँ गए । सबै विषय रातभरमा बिलाए । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्थे त्यही हो जस्तो छ । तर फोरमले सहकर्मी दललाई यसरी अडान फेर्नुको कारण के हो । अरु दलले कसरी लिने हुन् हेर्न बाँकी छ ।
वास्तवमा आफ्ना सहकर्मी दलसँगका प्रतिबद्धता पुरा नहुनु सबै पक्षका लागि नै दुःखद हो । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने थरुहट पनि आफ्ना मागप्रति अडिग छैन भने एक मधेशको विषयमा पनि आफ्नो अडानबाट फोरम पछाडि हटेको छ । यसले पनि के प्रष्ट पारेको छ भने फोरम पनि आफ्नो स्पष्ट दिशा नभएको पार्टी हो । यो आरोप लगाउनेहरुलाई उत्तरविहीन पार्ने हो भने फोरम र थरुहटले आफ्ना अडानलाई एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । होइन भने यो फुटको श्रृंखला अनन्त रहन सक्छ ।
बन्दविरुद्ध बोल्नु ठुलो काम
बन्द र हड्तालका कारण देश कङ्गाल बन्दै गएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले बताएका छन् । एक अन्तरक्रियामा काँग्रेस नेता डा. रामशरण महतले अब पनि बन्द र हड्ताल भइरहे देशको आर्थिक र राजनीतिक भविष्य अन्धकार हुने बताए । दोस्रो जनआन्दोलनयता बन्दमा खासै सहभागी नभएको काँग्रेस र एमालेका नेताले बन्दले देश कङगाल बनायो भन्नु उचितै हो । हो, उनीहरुले बन्द गरेका छैनन् त्यसैले यसरी बोल्न उनीहरुलाई नसुहाउने होइन ।
एमाले नेता रघुवीर महासेठले पनि सबै क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याउने बन्दलाई प्रतिबन्ध लगाउन व्यवस्था सविंधानमै गर्नुपर्ने बताए । तर कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने कुरा हो । होइन भने, अहिले सबैभन्दा बढी बन्द गर्ने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बन्दविरुद्ध कानुन बनाउनुपर्छ भनेर भनेकै हुन् । तर जब सरकारबाट बाहिर आए, भनेका कुरा सबै बिर्से र बन्दबाहेक अर्को हतियार नै छैन कि भनेजस्तो गर्छन् ।
तर माओबादी नेता हितमान शाक्यले बन्द गर्नु राम्रो नभएपनि माग पुरा गराउन बन्द गर्नु परेको तर्क गरे भने जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आमहड्ताल नगरी क्षेत्र क्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने आग्रह गरे । पछिल्लो समयमा बन्द गर्ने विषयमा कान्छो भाइ बनेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर कणले यस्तो बोलेछन् यो धेरै ठुलो कुरा हो । तर माओवादी नेताहरु भने अहिले बकाइदा भन्छन् कि बन्द गर्नु माग पुरा गराउन हो ।
आफुहरु सरकारमा हुँदा बन्दलाई नमान्ने अनि, आफ्ना माग पुरा गराउन भने बन्द गरेपनि हुने । यो निकै स्वार्थी भनाई भयो । यसतर्फ गम्भीरताको आवश्यक छ । सँगै खबरदारीको पनि आवश्यकता छ अहिले । भन्न खोजिएको के भने जस्ले बढी बन्द गर्छ उसैले मञ्चमा भाषणा गर्दा बन्दविरुद्ध बोल्छ, यो जत्तिको हँसाउने चरित्र के होला । कम्तीमा त्यसरी बोल्ने हो भने कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ नि । वास्तवमा यस्तो हुनुको कारण चाहिं सस्तो लोकपि्रयताको लागि हुनसक्छ ।
January 20, 2010 6:17 am
मन्त्रिपरिषदका सदस्यबीच पनि तादाम्यता छैन
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार मन्त्री शंकर पोखरेलले घुमाउरो शैलीमा माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन हुन नसक्ने रक्षा मन्त्री विद्या भण्डारीको भनाईको खण्डन गरेका छन् । रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले आफ्नो विभागीय संस्था सेनाको विषयमा मन्त्रिपरिषदका अरु सदस्य मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको मनसायभन्दा पनि बाहिर रहेर बोल्दै आएकी थिइन् । यो लुकेको अवस्थामा रहेकोमा अहिले आएर भने पुरै छताछुल्ल भएको छ ।
रक्षामन्त्रीले सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरुका भनाईसँग मेल खाने खालका भनाई व्यक्त गर्दै आएकी थिइन् । तर त्यसलाई बुद्धिजिवी, वामपन्थी लगायतका उनका आफ्नै सहकर्मीले पनि आलोचना गर्दै आइरहेका थिए । यसलाई धेरैले मानेका थिए कि उनको माओवादीसँगको मनमुटावको कारण नै उनले माओवादी प्रतिकुल वा माओवादीलाई सबैभन्दा धेरै चिन्ता दिलाउने विषयमा बोल्दै आएकी छन् । बोल्ने नै देखिन्छ आगामी दिनमा ।
आफुलाई रक्षामन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई त उनले मानेकी छैनन् । अब के माओवादी के विशेष समिति । कसैलाई पनि टेर्ने देखिन्न । विशेष समितिमा प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर असन्तुष्ट बनेकी रक्षामन्त्रीको बारेमा मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्यले नै असन्तुष्ट जनाएपछि अब रक्षामन्त्रीका अगाडि दुइटा मात्रै बाटो हुनसक्छन् । उदाहरणका लागि कि त प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेर पद छाड्ने । वा सहमतिमा आउने र प्रधानमन्त्रीकै सल्लाअनुसार अगाडि बढ्ने ।
मन्त्रिपरिषदले रक्षामन्त्रीले भनेजस्तो निर्णय गर्ने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ । किनभने संविधान बनाउने, शान्ति प्रक्रियाप्रति चौतर्फी दबाब तथा जिम्मेवारीका कारण पनि पछाडि हट्ने अवस्था देखिन्न । यही कारण पनि हुनसक्छ मन्त्रिपरिषद बैठकपछि मन्त्री पोखरेलले शान्ति सम्झौताका प्रावधान पालना गर्न सरकारक प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्‍याए । बरु अबको भिडन्त त प्रधानमन्त्री र उनले भनेको नमान्ने रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीबीच पो होलाजस्तो छ ।
विरोधका लागि विरोध मात्रै
सिराहाको लहानमा उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारलाई कालो झण्डा देखाउने क्रममा ६ जना माओवादी कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । कार्यक्रम थियो श्रद्धान्जलीको । कुनैबेला एकै पार्टीमा रहेका फोरमका कार्यकर्ताबीचको मनमुटावको परिणाम बनेको छ यो । हुन त माओवादीले झैं कालोझण्डा देखाएको जस्तो लाग्ने यो घटनाको पछाडि निकै द्धन्द्धको कथा छ । सरकारदेखि सडकसम्म रहेको विवाद झनै छताछुल्ल ।
मधेश आन्दोलनका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न लहान पुगेका गच्छेदारलाई कालो झण्डा देखाउने माओवादी कार्यकर्ताको फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यकर्तासँग झडप भएको थियो । मधेशवादी आन्दोलनका प्रथम शहिद रमेश महतोको दोस्रो स्मृति दिवश सिरहामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने क्रममा यो घटना भएको छ । ०६३ सालमा सिरहामा तत्कालीन माओवादी नेता मातृका यादवको नेतृत्वमा भएको गोली काण्डमा मारिएका रमेश महतोको स्मृतिमा मधेशवादी दलहरुले बेग्ला बेग्लै कार्यक्रम गर्नु पनि गज्जबको विषय बनेको छ ।
हो, आफ्नै पार्टीमा रहेका कुनै महत्वपुर्ण व्यक्तित्वको श्रद्धान्जली व्यक्त गर्ने क्रममा मनमुटाव गर्नुपर्ने ठोस कारण नरहेपनि यो विवाद निरर्थकजस्तो देखिन्छ । किनभने आफ्ना शहीदको सम्झना त आफ्नै तालले गरे भइहाल्थ्यो नि । किन झडप नै गर्नुपर्ने थियो र । दुइपक्षबीच झडप हुँदा विजेतालाई ती शहीदले स्याबासी त अवश्य पनि दिन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले यसलाई विवादका लागि विवाद नै भएको भन्नुपर्छ ।
सधै थिचिएका मधेशी समुदायलाई शिर उँचो हुनेगरी भएको मधेश आन्दोलनका शहीदको सम्झना गर्ने दिन त यस्तो विवाद छ भने यसलाई लिएर सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि यी दलहरु, खासगरी फोरमका दुइपक्षले कसरी अगाडि बढ्ने संशयकै विषय बनेको छ । साझा अधिकारका लागि कम्तीमा छुट्टएिका दुई दलसहित सम्पूर्ण मधेशी दल मिल्न सकेको भए यो बेइज्जती नै किन हुने थियो होला र ।
January 14, 2010 5:17 am
झनै बिग्रँदै गएको भारतसितको सम्बन्ध
एकिकृत माओवादीले बिहीबार धनगढीमा नेपाल-भारतबीचका चार वटा सन्धी जलाएको छ । राजधानीस्थित भारतीय दुतावास नजिकै रहेको रत्नपार्कमा माओवादीले भारतसँगका विविध सहमति जलाएको छ । माओवादी सम्मिलित नरहेका विभिन्न सहमति जलाइएको छ । यसले भारत र माओवादीबीचको सम्बन्ध झनै चिसिने स्पष्ट छ । त्यसो त भारतीय सिमामा माओवादीहरुले विरोध सभा गरेका छन् ।
सन १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धी, गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता र महाकाली सम्झौता जलाइएको छ । केही केही रुपमा माओवादीको सत्ता आरोहण तथा सदभावका लागि चाहिने भारतीय समर्थनलाई पनि यो कार्यले त्यसै डामाडोल पारेको छ । किनभने माओवादीभित्र सबै आँखा बन्द गरेर विरोधमा उत्रिहाल्ने मानिस छैनन् होला । त्यसैले त होला नि बेलाबेलामा माओवादीका शीर्ष नेताबीच खटपट चलिरहन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ कि माओवादीहरुले आफु सत्तामा रहँदा नजानेको कुरा कसरी थाहा पाएछन् अहिले । माओवादीमा डिग्री पढेका मानिस त सरकारमा रहँदा पनि त थिए नि । अहिले आएर यो खालको विरोध र असहमति आउनु बडो अचम्मको विषय बनेको छ । तर शुभकामना भने के दिन सकिन्छ भने माओवादीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाएर त्यो सफल भएको हेर्न सकुन् । वा भनौं सबै मानिसलाई महसुस गराउन ।
जे भएपनि कम्तीमा माओवादीहरुले आवेशमा आएर विरोधमा उत्रिनुको परिणाम के हुन्छ, भनेर जान्नु पनि आवश्यक हुनजान्छ । हो, राष्ट्रियताको मामिलामा सधैंभरि गुलाम बसिरहनु आवश्यक छैन । रणनीतिक रुपमा जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने माओवादीको सही रणनीति हो यो, तर यसले पार्ने प्रभावबारे पनि सचेत हुनु जरुरी छ । कस्तो प्रभाव भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, भोगेकै कुरा हो नि, यत्रो लामो इतिहासमा भारतीय बाट आउने दबाब ।
गम्भीर विषयमा सभासदहरुको हेलचेक्रयाइँ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तमा सिफारिस गरिएका केशव बरालको बारेमा संसदीय सुनुवाई हुन सकेन । कारण विवाद थिएन । बरु कारण थियो त बराल उपस्थित भएपनि गणपुरक संख्या पुगेन । गणपुरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको छ । सभासदहरु आफ्नो समिति अन्तर्गतको काममा उपस्थित हुन किन नसक्ने, प्रश्न गर्ने कस्ले । यो गम्भीर नभएर नै हो । विषयवस्तुको गाम्भीयर्तामा ध्यान नदिएर यस्तो भएको हो ।
बैठक बस्नका लागि कम्तीमा २५ जना सभासद् आवश्यक हुनेमा तोकिएको समयमा नौजना मात्र सभासद् मात्र उपस्थित थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम सामान्य होइन भन्ने कुरामा विवाद छैन । आयोग आयुक्तविहिन हुनु भनेको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा ठेस लाग्नु हो । यति कुरा त सामान्य नागरिकको हैसियतमा सबैले बुझ्ने कुरा हो । तर यसबारे सोचेको देखिएन यो घटनाबाट । बिचरा बराल उपस्थित भएपनि सभासदको चाला देख्दा के सोचे होलान् उनले ।
सीमा विवाद, विवादित जहाज खरिद प्रकरणमा सभासदहरुको भूमिकाको प्रशंसा भएपनि अलिकति जागरुकता नदेखिंदा भने सबैको मन खिन्न हुँदो हो । सभासदको भने मन नै खिन्न भएन । अख्तियारको नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा भ्रष्ट्राचारका कैयौं मुद्दा अगाडि बढ्न नसकेर भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा कठिनाई उत्पन्न भएको बारेमा अध्ययन गर्न लगाउनुपर्ने हो सभासदहरुलाई । हो, वास्तवमा केही लगानी गरेर भएपनि एकदिनको अनुपस्थितिले हुने क्षतिको मुल्याङकन गराउनुपर्ने हो ।
यस्ता घटना यसअघि पनि नभएका होइनन, तर कम्तीमा संवैधानिक अंगका प्रमुखको सुनुवाईका बेलामा अनुपस्थित हुने सभासदको बारेमा के भन्ने । राज्यले नै यसबारे विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । के कारणले उपस्थित नभएको जस्ता सामान्य जानकारी पनि सो समितिले उपलब्ध गराउनुपर्छ । जवाफदेहीताको कुरा गर्ने सभासदहरुको यो व्यवहार भने पटक्कै सुहाएन । त्यसैले नियुक्ति, दुरगामी असर गर्ने खालका विभिन्न विषयमा सभासदहरु अरु गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
सुरक्षाबारे संसदमा गृहमन्त्रीको व्यंगात्मक धारणा
गृहमन्त्री भीम रावलले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम भएको दाबी गरेका छन् व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै । त्यससँगै गृहमन्त्री रावलले गुणात्मकताको कुरा गर्नुको सट्टा परिमाणको कुरा गरे र भने कि विभिन्न पहाडी जिल्लाहरुमा थप ६० जना सशस्त्र प्रहरी पठाइएको भनेर । साथै सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रमा पनि अमन चयन कायम गर्न सफल भएको गृहमन्त्रीको भनाई छ । सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि नै हुने गरेका दुव्र्यवहार रोक्न गरिएका प्रयास जस्ता ठोस कुरा केही पनि गरिन्नन् । केवल ठीकठाक ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा दरवन्दी बढाउने प्रस्ताव पनि मन्त्रीपरिषदमा लगिएको भनेर कुरा उही परिमाणको । गुणात्मकताको त कुरै छैन । सीमित जनशक्तिले पनि कसरी असीमित काम गर्छ भन्नेमा चुपचाप । अब यहाँ गुणात्मकको कुरा किन गरिएको हो भने वीरगन्जमा एउटा सानो सशस्त्र समुहबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सुरक्षित छैनन् । वीरगञ्जका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलबहादुर मल्लमाथि अज्ञात समूहले हानेको गोली लागेर उनका अंगरक्षक आनन्दराज खड्का मारिएका छन् । के प्रहरीको संख्या बढाउँदैमा यस्ता घटना रोकिन सक्छन् त ।
आफ्नै प्रशासनको कमजोरीका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भएका कर्मचारीले काम नै रोकेर विरोध प्रदर्शनको विकल्प छैन । बिचरा गृहमन्त्री भने चारैतिर सुरक्षाले घेरिएको संसद बैठकमा सुरक्षा व्यवस्था सुधि्रएको स्पष्टीकरण दिन मस्त छन् । यहींनेर त नबुझेको कुरा छ । आफ्ना कर्मचारी माथि आक्रमण भएको भयै, अनि सुरक्षा भने सुध्रेको भन्ने ? वीरगञ्ज घटना नहुँदे मन्त्रीज्यूको भाषण छापिइसकेको अवस्थामा जे घटना भएपनि परिवर्तन नहुने अवस्था आएकोले यस्तो भनाई आएको हुनसक्छ ।
हो, कम्तीमा यस्ता विषयलाई मात्रै भएपनि ध्यान दिएर अधिकारीहरुका भनाई निर्धारण भए पो, वास्तविकता र कुरामा तारतम्यता मिल्ला, होइन भने जनतालाई सुनाउने एउटा कुरा, अनि धरातलमा हुने अर्को कुरा । भ्रमको खेती भन्ने कि झुटको खेती भन्ने, कुरा एकातिर अनि वास्तविकता अर्कोतिर भएकोलाई । अनावश्यक बन्द र तिनमा हुने तोडफोडलाई त रोक्न नसकेको अवस्थामा भाषण मात्रै ठोकेर के गर्नु र खै ।
संयन्त्रले के गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण
सबै समस्याको समाधान गर्न मुख्य कारकको रुपमा हेरिएको राजनीतिक जटिलता समाधान गर्न प्रमुख तीन दल माओवादी, काँग्रेस र एमालेले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र घोषणा गरेका छन् । संयन्त्रको घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिंदै दल तथा गैरदलका अगुवाहरुले स्वागत गरेका छन् । साथै अन्तरराष्ट्रिय संगठनहरुले पनि यसलाई स्वागत गरेका छन् । वास्तवमा धेरै लामो समयपछिको तयारीपछि यो गन भएकोमा आशा जाग्नु स्वभाविकै हो ।
आशा गर्ने यो बाटोसँगै असन्तुष्टि जनाउने ठाउँ पनि छैन । संयन्त्र गठन भएको १२ घण्टा नपुग्दै विभिन्न फोरममा पुगेका नेताहरु भाषणा ठोक्दे आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त हुन थालेपछि कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रामा राखे पनि जस्ताको तस्तै भनेझैं संयन्त्र बनाइएपनि नेताहरुको मति नसुधि्रएसम्म केही हुनेवाला छैन । उदाहरण अरुको हेर्नै पर्दैन, माओवादी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई गाली गरेको तथा प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादीप्रति आक्रोशित र उत्तेजित कुरा गरेका छन् ।
शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने, संविधान निर्माण र वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरु केही भएपनि गम्भीर छन् है भन्नेसम्म चाहिं यसले पारेको छ । तत्कालका लागि तीन दलका नेता मात्र सम्मिलित भएपनि क्रमशः अरु राजनीतिक दलका नेतालाई पनि संयन्त्रमा सहभागी गराउने बताइएको छ । अरु दलका नेताले भोलिदेखि आलोचना गर्न थाले भने संयन्त्र पनि उनै कार्यदल, आयोग र समिति भन्दा के फरक पर्ला र ।
घर्किदै गएको संविधान निर्माणको समय र नेताहरुबीच बढ्दो कटुताका बीच बनाइएको यस संयन्त्रले दलहरुलाई विश्वासमा लिँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ । कम्तीमा यो संयन्त्र बनेपछि मिलेजस्तो गर्ने अनि संविधान निर्माणमा अवरोध नआए काफी काम हुने थियो । अथवा कम्तीमा सरकार सञ्चालन गर्न लोभ नदेखाएर केही समय सरकार बाहिर बसे पनि फरक पर्दैन भन्ने सोच्नु आवश्यक छ ।